White ero - umu - Mushrooms - 2020
Aha ero ọcha natara site n'oge ochie. Mgbe ahụ, ndị mmadụ na-anọkarị na-akpọrọ mushrooms. Ọkụ nke na-acha ọcha ọcha nọgidere na-adị ọcha mgbe ọchara ma ọ bụ ọgwụ ọkụ. Nke a bụ ihe kpatara aha a. Ọcha ọcha bụ nke dị na Boletus, ya mere aha nke abụọ na-acha ọcha bụ boletus.
Ọ dị mkpa! Mgbe ichikota mushrooms, ọ dị mkpa iji ngwa ngwa malite ịhazi ha, ebe ọ bụ na ndị na-acha ọcha mushrooms anaghị eji ngwa ngwa ha bara uru. Dịka ọmụmaatụ, mgbe awa iri gasịrị, ero ahụ enweelarị ọkara nke mineral na ihe ndị e dere.
Tụlee ụdị ero ero ọcha na nkọwa ha. Ha nile sitere na mushrooms oriri nke ụdị mbụ ma nwee ọdịdị ahụ.
White ero ero (Boletus pinophilus)
White ero birch (Boletus betulicola)
Ọchịchịrị Ọchịchịrị Ọcha Ncha (Boletus aereus)
Nnukwu osisi oak (Boletus quercicola)
Ngwurugwu na-acha ọcha na-acha ọcha (Boletus impolius)
Boletus nwa (Boletus appendiculatus)
Borovik eze (Boletus regius)
Nnukwu ero (spruce) (Boletus edulis)
Ọ na-ezo aka n'ụdị nke kachasị nkịtị ma nwee ụdị ọdịdị. Okpokoro ahụ bụ aja aja ma ọ bụ chestnut na agba nke 7-30 cm. O nwere ọdịdị nkwonkwo, mgbe ụfọdụ ohiri isi. Ala ya dị mma na velvety ma esighi na pulp.
Ụdị nke ụkwụ ụkwụ na-eto eto na ala, na-eru ogo dị elu nke 12 cm ma a na-ewere elu na ụdị ero ọcha. A na-ekpuchi elu ụkwụ ya na ntutu ma nwee eriri na-acha ọcha. Nri ahụ dị nro, ísì dị nro ma onye ọ bụla na-emekarị ka ọ bụrụ nri ma ọ bụ ihicha. N'okpuru okpu bụ tubular oyi akwa 1-4 cm n'obosara, nke a na-adị mfe iche site na pulp na nwere tint tint.
Ọkụ nke ero ahụ bụ ọcha anụ ahụ ma ọ dịghị agbanwe agba mgbe agbajiri. A na - ahụ ụdị a n'ọhịa na osisi ohia na nnukwu ebe Eurasia, ma e wezụga Iceland, na mpaghara niile, ma e wezụga Australia. Mkpụrụ osisi n'otu n'otu ma ọ bụ na yiri mgbaaka. Ụdị mycorrhiza na osisi osisi na osisi coniferous.
Ọtụtụ mgbe, ọ na-egosi russula green and chanterelles. Na-ahọrọ ọhịa ochie na akpa na lichen. A na-ewere ọnọdụ ihu igwe dị mma maka ọdịdị dị ọcha nke mushrooms dị ka obere thunderstorms na ehihie na ehihie na-ekpo ọkụ. Ọ na-ahọrọ aja aja, ájá na ájá ájá na oghe dị ọkụ. A na-eme ihe owuwe ihe ubi na June - October.
Àgwà ndị na-edozi ahụ na-acha ọcha bụ ndị kasị elu. Eji ya na raw, sie, ụdị a mịrị amị. Site na ọdịnaya nke nri na ihe ndị na-acha ọcha ọcha anaghị agafe ụdị anụ dị iche iche, kama ọ bụ ihe na-akpali akpali nke mgbaze.
Ndị ọkà mmụta sayensị egosila na ero na-acha ọcha bụ ihe siri ike nsị n'ihi ahụ chitin, mana mgbe ọ na-ehicha ya, ọ na-aghọwanye digestible (80%). Maka ebumnuche ọgwụgwọ, nkà mmụta ọdịnala na-eji ọgwụ mgbochi, ihe ndị na-akpali akpali nke ceps.
Ụdị a yiri nkọwa zuru oke nke ero ọcha, ma dị iche na ụfọdụ njirimara.. Okpuegwu bụ 8-25 cm ke dayameta, ọbara ọbara-aja aja na agba na violet hue, ma obere ọkụ ọkụ na nsọtụ. N'okpuru akpụkpọ ahụ okpu anụ ahụ bụ pink. Agba mkpuru na oke, 7-16 cm n'ogo. Ụcha ya dị ntakịrị karịa okpukpu, ma kpuchie ya na nchara nchara. Tubular oyi akwa ruo 2 cm n'obosara acha. E nwere ụdị mmalite nke ero chacha acha ọcha. Differs na agba agba nke okpu na pulp n'okpuru ya. Na-apụta na ngwụsị oge opupu ihe ubi.
Ụdị a na-emekarị mycorrhiza ọtụtụ mgbe na pine. Ọ na-ahọrọ ala ájá ma na-etolite n'otu ma ọ bụ n'ìgwè dị nta. Egwuregwu ọcha ọcha na-achakarị na Europe, Central America, na Europe nke Russia. A na-ewe ihe ubi na June ruo October.
Mgbe ụfọdụ, n'ógbè ndị dị na Russia, a na-akpọ ya kolosovik n'ihi ọdịdị nke rye n'oge ntị. Ụdị a nwere obere odo odo, nke ịdị nhata 5-15 cm na dayameta. Anụ ahụ agbanweghị agba na nkwụsịtụ, ma ọ nweghị uto. Ụdị ụkwụ dị na mịrị, na-acha ọcha na agba na ntutu ọcha. Akara tubula nke onyinyo ndò dị elu ruo mita 2.5 n'obosara. Birch boletus na-emepụta mycorrhiza na birch. Na-agba ọsọ n'otu ma ọ bụ n'ìgwè. Na-amasị m na-eto eto na n'akụkụ ma ọ bụ na ụzọ. A na - achọta ya n'Ebe Ọdịda Anyanwụ Europe, na Russia - na Murmansk, Siberia, na n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Ụwa. A na-ewe ihe ubi na June ruo October.
Ị ma? A na-emewanye nro ọcha ahụ ruo ụbọchị itoolu, ma e nwere ụfọdụ ụdị na-eto ụbọchị 15.
Mgbe ụfọdụ, a na-akpọ ụdị ihe a na-akpọ ọla kọpa ma ọ bụ nsị porcini. Oke bụ anụ ahụ, ọdịdị dị mma, nke ruru 7-17 cm. Akpụkpọ ahụ nwere ike ịdị mma ma ọ bụ obere oghere, aja aja gbara ọchịchịrị, ọ fọrọ obere ka ọ bụrụ oji. Anụ ahụ na-acha ọcha, nwere uto dị ụtọ na ísì, mgbe agbajiri agbaji, ọ dị ntakịrị njọ. Ụkwụ ya bụ ihe dị arọ, oke, pink-agba aja aja na agba na ntutu anụ. Ogwe osisi tubular nwere agba odo na obosara ya ruo 2 cm, ma mgbe ọ na-emetụ ya, ọ na-aghọ agba oliv. A na-ekesa ụdị a na oke osisi na-ekpo ọkụ. A na-ahụkarị na Western na Southern Europe, Sweden, North America. Oge mkpụrụ osisi ahụ bụ site na July ruo October, ma ọ dị n'Austria na May na June. Gụnyere na Red Akwụkwọ nke Ukraine, Montenegro, Norway, Denmark, Moldova.
Site na uto gourmets na-enwe ekele karịa igwe fir. O nwere ihe mgbochi ndị yiri nke a na-eji ihe oriri Polish (Xerocomus badius), anụ ahụ ya na-acha anụnụ anụnụ na ụkwụ ya enweghị ọnyà. A na-ahụkwa n'ọhịa ndị a na-ejikọta ọnụ na ọkara na-acha ọcha ọla (Boletus subaereus), nke nwere ụcha ọkụ.
Ngwongwo na-acha ọcha dị iche iche na-adị iche site na spruce otu na mpempe akwụkwọ agba nke okpu na a na-akpọ mesh na ụkwụ. A na-ewere ya dịka ihe mbụ ụdị anụ ọ bụla dị ọcha. Okpokoro ahụ ruru a dayameta nke 6-30 cm ma nwee ìhè agba aja aja agba. Ọkụ ahụ bụ anụ ahụ na-acha ọcha, n'okpuru akpa ahụ nwere agba odo. Okpokoro ahụ dị mkpụmkpụ, okpukpu, okpokoro osisi, aja aja na agba ma dị iche na ụdị ndị ọzọ site na ọnụnọ nnukwu usoro. Ngwunye ọcha dị ọcha nwere ezigbo ísì na ụtọ uto ụtọ.
Okpukpo nke akwa tubular dị ka cm 3.5 cm. Agba ya dịgasị iche iche na-acha ọcha na-acha odo odo. Ihe dị iche iche nke ụdị a bụ ọnụnọ cracks na akpụkpọ anụ mushrooms. Ụdị a na-emepụta mycorrhiza na beech, oak, chestnut, hornbeam ma na-amụba na ọnụ n'akụkụ akọrọ, ala alkaline.
Ọ bụ ụmụ ahụhụ anaghị adịkarị njọ. Na-arịwanye elu na Europe, North Africa, North America. A na-ewe owuwe ihe ubi site na May ruo October. Ngwá ọcha dị ọcha dị ka birch, nke nwere ụdọ ọkụ na ụtarị mkpụmkpụ.
Otu ihe dị iche iche na-acha chaa chaa na-acha ọcha bụ okpu na-acha uhie uhie na agba agba. Ọ na-agba agba karịa agba birch. Anụ ahụ dị ụkọ karịa ụdị ndị ọzọ. Ọ na-etolite na Caucasus, na Primorsky Krai. A na-eme ihe owuwe ihe ubi na June-October. Ọ na-etolite n'ụzọ dị mma, nke na-adịghị ahụkarị maka ndị na-acha ọcha mushrooms.
Ọ dị mkpa! Dị ka ihe na - acha ọcha - ero ero. O bu ihe ojoo n'ihi obi ilu ya. Ihe dị iche iche na-acha ọcha na-acha ọcha bụ akwa pinking na akpụkpọ ahụ na-acha oji nke ụkwụ.
Ngwurugwu na-acha ọcha na-acha ọcha bụ nke dị na boletus ma bụrụ nke a na-akpọ odo boletus. Okpokoro ahụ ruru otu dayameta nke 5-15 cm ya na akpụkpọ anụ na-acha aja aja. Ahịhịa nke ero bụ oke, odo odo. Nri dị ntakịrị ụtọ, ísì na-echetara carbolic acid.
Ụkwụ ahụ dị oke, na-agbanye mgbidi, ruo 15 cm elu, agba aja. Ụdị ntutu ụkwụ na ụkwụ na-efu, mana elu dị ike. Tubular oyi akwa ruo 3 cm oké odo. Na-eto n'osisi oak, beech, ọhịa mpi ma na-ahọrọ ala akọrọ. Yellow boletus sitere na mushrooms ndị dị na thermophilic ma dịkarị na Polesie, Carpathian, nke dị na Central Europe na Southern Europe. A na-eme ihe owuwe ihe ubi site na May ruo ụbịa.
N'ebe ụfọdụ, n'ihi na isi ísì a kọwara dị ka nsị oriri. Na uto abụghị ihe dị ala karịa ncha ọcha. Mgbe ihicha ma kpochapu ísì ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kpamkpam. N'ihe ngosi ndị dị na mberede, ọ dị ka nwata nwanyị, ma dị iche na ya site na isi ísì ma ọ dịghị agbanwe agba nke pulp n'oge ezumike.
Dị ka nkọwa ahụ na boletus odo, ma nwee ísì ụtọ, anụ ahụ na-agbaji agbaji anụnụ anụnụ. Okpokoro na dayameta ruru 8-20 cm, nwere agba odo odo na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie. Ahịhịa nke ero bụ odo, na-acha anụnụ anụnụ. Ụkwụ ya dị oke, na-agbatị na isi ya ma na-eto 7-15 cm elu.O nwere oriọna dị ọcha ma kpuchie ya na ncha ncha. Ogwe osisi tubular ahụ ruru na 2,5 cm, na-acha odo odo na agba na-acha anụnụ anụnụ mgbe enwere ya. Nwa nke Borovik na-emepụta mycorrhiza na osisi osisi na-eto eto ma na-etolite n'ebe ndịda Europe. A na-ewe ihe ubi n'oge okpomọkụ - mgbụsị akwụkwọ.
Royal Borovik dị iche iche na-acha uhie uhie na-acha odo odo ma na-acha odo odo na ụkwụ na mkpa ncha ụkpụrụ na akụkụ elu. Okpu okpu na-eru na dayimita 6-15 cm ma nwee ezigbo akpụkpọ anụ, ma mgbe ụfọdụ, ọ na-eji kpuchie ntutu. Ahịhịa nke ero ahụ dị oke, odo na agba, na-agbaji agbaji anụnụ anụnụ. Ero ahụ nwere ezigbo ísì na uto. Ụkwụ na-agba, nwere mita 5-15 cm.
Egwu na-acha ọcha ọcha na-etolite n'ọhịa ọhịa. Na-ahọrọ aja na calcareous Ona. A na-achọta ya na Caucasus, n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Ụwa. Oge ịmị mkpụrụ bụ July - September. Egwu nwere uto magburu onwe ya ma jiri ya mee ihe na ndu.
Ị ma? Na Ukraine, na mpaghara Ivano-Frankivsk, nke dị nso n'obodo Verkhniy Maidan, a na-achịkọta mushrooms dị ọcha 118 na mita 16. Ejiri ero ọcha nke ruru 6.75 n'arọ na Russia nso Vladimir na 1964.
Ngwurugwu ọcha bụ ihe a ma ama na ọkacha mmasị maka onye ọ bụla na-egwupụta ihe nsị. Enwe ike ịmalite ịdị elu ma na nnukwu nha ma na-atọ ụtọ ma na-edozi ahụ. Mgbe ị na-achịkọta mushrooms, echefula ihe bụ isi nke onye na-egwunye ọka: ma ọ bụrụ na ị maghị ụdị ero a maara nke ọma, tụfuo ya, anaghị enwe ohere!